Ihhovisi leNyuvesi lezokuHlelwa nokuThuthukiswa koLimi (ULPDO)libambe umhlangano wokucobelelana ngolwazi ngokwakhiwa kwesichazamazwi sesiZulu obusekhempasini e-Westville lapho bekuthuthukiswa khona umhlahlandlela ozosetshenziswa yimikhakha ehlukene okubalwa kuyo ezobuHlengikazi nezemiDwebozakhiwo.
Lo mhlangano ubuphethwe uMnu Mpume Mbatha oyisazi kwezokwakhiwa kwezichazamazwi zesiZulu oneminyaka engaphezulu kwama-30 kulomkhakha. UMbatha ubalule ukuhlela ngaphambi kokuthuthukisa isichazamazwi njengesinyathelo esibaluleke kakhulu, uphinde wagcizelela nokubaluleka komhlahlandlela wokubhalwa kwesichazamazwi ochaza ngezingxenye ezahlukene zesichazamazwi ukuthi kumele zihlelwe kanjani.
UMbatha, oyinhloko ye-National Lexicographic Unit uthe bangaphezulu kwamaphesenti angama-80 abantu abakhuluma isiZulu KwaZulu-Natali.
Umhlangano ubuye waba nezingxoxo ebeziholwa uSolwazi Abednego Maphumulo obengusihlalo wohlelo lokwakha umhlahlandlela ozosetshenziswa yimikhakha ehlukene ekwakheni izichazamazwi.
Umqondisi we-ULPDO uDkt Langa Khumalo uthe iNyuvesi isemkhankasweni ohlelekile wokuthuthukisa amatemu emikhakha ehlukene. “ Ongoti bezolimi nongoti emikhakheni ehlukene bachitha isikhathi eside benkankanya amatemu ngesiNgisi nangesiZulu emihlanganweni esuke ihlelwe i-ULPDO.’ Lokhu kwenziwa ngokubambisana nehhovisi leBhodi Yezilimi i-Pan-SALB lesifundazwe saKwaZulu-Natali.
UKhumalo ubonge uMnu Mbatha nabo bonke abebebambe iqhaza ngokuba yingxenye yalomhlangano